यो रोग भएका व्यक्तिले खानुहोस् बासी रोटी, निको पार्छ पेटको समस्या ! – Dailny NpNews
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ १७, २०७८ समय: १४:०७:५१
रैले बेलुका पख होस् या दिउँसोमा रोटी बनाएर खाने गर्छन् । कहिलेकाही रोटी खाँदै जाँदा बढी हुन्छ । बेलुका रोटी खाँदा रहेमा भोलिपल्ट खाने पनि गरिन्छ । किनकी बासी रोटी पनि मिठो हुन्छ । बासी रोटी खाँदा मिठो हुने मात्र होइन शरिरलाई फाइदा पनि गर्छ । यदि तपाई पेट खराब भएर तनाव भइरहेको छ भने बासी रोटी खाँनु राम्रो हुन्छ । दुध र बासी रोटीको सेवनले तनाव घटाउन र पेटको समस्या निको पार्छ ।
सुगर भएकाहरुले पनि दुध र बासी रोटी खानु राम्रो हुन्छ । उच्च रक्तचाप वा ब्लडप्रेसरको समस्या भएकाले पनी बिहानै चिसो दुधसँग बासी रोटी खानु राम्रो हुन्छ । यदि तपाईलाई ग्यास्ट्रिकको समस्या छ भने पनि बासी रोटी खाने गरेमा समस्या हट्छ ।
प्रायः होटलमा पाक्ने पिठोजन्य खाद्य पदार्थ मैदाबाट बन्दछ । प्याकेट बन्द खाद्य पदार्थमा पनि मैदाको प्रयोग हुने गर्दछ । मैदा हाम्रो स्वास्थ्यकालागी अस्वस्थ्यकर हुन्छ । त्यसैले आटा वा गहुको चोकरयुक्त पिठोको रोटी खानु उत्तम हुन्छ । चोकरयुक्त आटा सेवन गर्दा के लाभ हुन्छ त ?
१. यसको सेवनले कब्जियतको समस्याबाट समेत छुटकारा दिलाउँछ ।
२. चोकरयुक्त आटा फाइबरले भरपुर हुने भएकाले यसको सेवनले पाचन सम्बन्धी कुनैपनि समस्या हटाउन सक्छ ।
३. चोकरयुक्त आटाको सेवनले टिबीजस्ता खतरनाक रोगबाट लड्ने क्षमता विकास हुन्छ ।
४. चोकरयुक्त आटाको सेवनले रगतमा इम्यूनोग्लोब्यूलीन्सको मात्रा बढाउँछ । यो शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन समेत उपयोगी हुन्छ ।
५. पाइल्सको समस्या भएकाहरुले चोकरयुक्त आटाको सेवन गर्नु अत्यन्त राम्रो हुन्छ । यसले आन्द्रा तथा मलाशयको क्यान्सर हुनबाट बचाउँछ । चोकरयुक्त आटाले पेट सफा राख्दछ ।
६. चोकरयुक्त आटाको सेवनले कोलेस्ट्रोल कम गर्ने, मोटोपनको समस्या र हृदयरोगमा समेत लाभ पुर्याउँछ ।